Maalgelinta cryptocurrency ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee lacagtaada 2022? -
Bogga ugu weyn Maalgelinta cryptocurrency ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee lacagtaada 2022?
Maalgelinta cryptocurrency ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee lacagtaada 2022?
isha sawirka: shutterstock
Waxaa jira lacago badan oo loo yaqaan 'cryptocurrencies', waxayna noqonayaan kuwo caan ah. In kasta oo aanay taageero ka haysan dawlado, sidoo kale ma maamulaan bangiyada dhexe. La yaab ma leh dadku way waydiiyaan, cryptocurrency waa maalgashi wanaagsan ama mid xun.
Suuqa cryptocurrency ee caalamiga ah waxaa lagu qiimeeyaa ku dhawaad ​​$300 bilyan, laakiin way adagtahay in la sheego lacagaha badbaadi doona ama in qiimuhu kor u kacayaan ama hoos u dhici doonaan mustaqbalka.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' ayaa laga iibsan karaa oo lagu kala iibsan karaa internetka, laakiin dawlado badan ayaa qaaday tillaabooyin lagu xakameynayo lacagta ama waxay mamnuuceen isticmaalka guud ahaan dhaqdhaqaaqa maaliyadeed.
Si lagaaga caawiyo inaad go'aansato inay tani tahay maalgashi fiican adiga, halkan waxa ah waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Immisa lacag ayaa la heli karaa? Waa imisa qiimahoodu?
Lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee caanka ah 2022
Mushaar Burbur (BNB)
Maxay tahay sababta loo yaqaan 'cryptocurrencies'?
Cryptocurrencies ma maalgashi wanaagsan baa?
Crypto ma maalgashi waqti dheer ah oo hufan?
Sideen u iibsadaa cryptocurrency?
Lacagta loo yaqaan 'cryptocurrencies' ma sharci baa?
Sideen isu ilaaliyaa?
Waqtigu Waa Furaha
Su'aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan maalgashiga cryptocurrency
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' waa qaab lacag-bixineed khadka tooska ah oo lagu beddelan karo alaab ama adeegyo. Shirkado badan ayaa soo saara lacagahan loo yaqaan 'cryptocurrencies', oo loo yaqaan tokens, waxaana kuwan loo isticmaali karaa in lagu galo badeecada gaarka ah ama adeega shirkadu bixiso.
Ka fikir iyaga inay yihiin calaamado arcade ah oo aad ku beddesho ciyaar ama calaamada mashiinka booska oo aad siiso si aad u gasho casino.
Waxaad u baahan doontaa inaad ku beddelato lacagta dhabta ah qaabkan lacag-bixineed si aad u hesho alaabta ama adeegga.
Marka la gaaro Disembar 2021, in ka badan 15,000 oo cryptocurrencies kala duwan ayaa si guud loo ganacsan doonaa, sida uu qabo CoinMarketCap.com, mareegaha cilmi-baarista suuqa.
Cryptocurrencies waxay sii wadaan inay sii kordhayaan. Wadarta qiimaha dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee Dec. 10 2021 waxay ahayd qiyaastii $2.3 trillion: horaantii sanadka, wadarta qiimaha dhammaan bitcoins-lacagta dhijitaalka ah ee ugu caansan ayaa lagu qiimeeyay ilaa $932 bilyan.
Seeraar waa lacag dhijitaal ah oo ku soo korodha caannimada sababtoo ah sahaydeeda ayaa go'an.
Si ka duwan lacagaha fiat (lacagaha sida doollarka Maraykanka ama Yen-ka Japan ee uu taageero bangiga dhexe), Bitcoin kuma xidhna daabacaadda rabitaanka siyaasiyiinta oo si sahal ah looguma dhimi karo sicir bararka.
Maalgashadayaal badan ayaa aamminsan in Bitcoin ay kordhin doonto qiimaha muddada dheer maadaama lacagaha fiat-ka ay noqdaan kuwo aad u qiimo yar.
Akhri: Sida loo iibsado Coinbase Stock 2022
Ethereum waa qadaadiicda asalka ah ee madal Ethereum waxaana iibsan kara maalgashadayaasha raba inay helaan faylalka faylalka ee Ethereum.
Iyadoo Bitcoin loo arki karo sida dahab dijital ah, Ethereum waxay dhisaysaa xisaabinta caalamiga ah ee taageera cryptocurrencies kale oo badan iyo nidaamka deegaanka ballaaran ee codsiyada baahsan - "dapps" -oo lagu dhisay madal Ethereum.
Tirada badan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo lagu dhisay madal Ethereum, oo ay weheliso dabeecadda furan ee dapps, waxay abuurtaa fursado Ethereum si ay sidoo kale uga faa'iideysato saameynta shabakadda iyo in ay abuurto qiimo wakhti dheer ah maalgashadayaasha hore.
Qalabka Ethereum wuxuu awood u siinayaa isticmaalka "qandaraasyada casriga ah," kuwaas oo si toos ah u fuliya iyada oo ku saleysan shuruudaha si toos ah loogu qoray koodkooda. Shabakadda Ethereum waxay ka ururisaa Ether dadka isticmaala si ay u fuliyaan qandaraasyo caqli-gal ah.
Solana, oo ah shabakad xawaare sare leh oo suuqa lagu soo bandhigay horraantii 2018, ayaa si dhakhso ah u koray caan iyo qiimo. Lacagta cryptocurrency ee lagu ganacsanayay agagaarka $0.01 bishii Janaayo ayaa hadda qiimaheedu ku dhow yahay $2.50, sida uu qabo CoinMarketCap.
Goobta DeFi ayaa la filayaa inay ku koraan caannimada sanadaha soo socda. Solana, shabakad saaxiibtinimo-saaxiibtinimo leh oo leh khidmadaha wax kala iibsiga ka hooseeya Ethereum waa cryptocurrency weyn ee maalgashadayaasha iyo ganacsatada inay tixgeliyaan iibsashada dhibcaha qiimaha hadda.
Binance Coin waa astaanta asalka ah ee blockchain Binance Smart Chain, taas oo ah isweydaarsiga cryptocurrency ugu weyn marka loo eego wadarta guud ee ganacsiga.
The binance Coin ayaa 0.7% ka ahaa suuqa cryptocurrency horraantii Disembar 2018, saamigeeda suuqana waxa ay kor u kacday 4.1% dabayaaqadii Disembar.
Sida qaar badan oo ka mid ah lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee leh suuqyada ugu sarreeya, BNB waxay bixisaa soo celinta maalgashiga iyada oo loo marayo abaal-marinnada macdanta, abaal-marinnada, iyo qiimo qadarin leh.
Sahayda ayaa lagu xaddidi doonaa 100 milyan BNB, iyada oo gubashada saddexdii biloodba mar ay hoos u dhigto sahayda iyadoo la raacayo baahida xooggan.
MATIC, madal cryptocurrency ah oo qayb ahaan ay maalgelisay Binance iyo Coinbase ayaa lagu dhisay Ethereum.
Hadafka madalku waa in la abuuro nidaam silsilado badan oo Ethereum ah, taas oo u oggolaan doonta isticmaalka guud ee isticmaalka cryptocurrencies. MATIC hadda waxa ay ka mid tahay 15ka ugu sarreeya ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' marka loo eego suuqa, waxa uu ka kordhay wax ka yar 2 senti bishii Jannaayo ilaa $2 horraantii Disembar.
Waxay dib uga soo kabantay horraantii Disembar iibkii, kor u kacday 21% intii u dhaxaysay Noofambar 28 iyo Disembar 5. MATIC sidoo kale waa mid ka mid ah calaamadaha ugu wanaagsan ee la maalgashado Disembar iyo wixii ka dambeeya sababtoo ah adkeysigeeda xilliyada adag.
Avalanche, oo ah shirkad blockchain ah oo ay taageerto shirkadda ganacsiga ee Andreessen Horowitz waxaa aasaasay cilmi-baarayaasha sayniska kombiyuutarka ee Jaamacadda Cornell.
Lacagta qadaadiicda AVAX waxay ku bilaabatay ganacsiga sanadka kaliya $3.17, laakiin waxay si degdeg ah u heshay saamiga suuqa iyadoo isticmaalayaasha cryptocurrency ay si isa soo taraysa ugu qulqulayaan Avalanche's smart-contract blockchain network.
Waqtigan xaadirka ah, ganacsiga in ka badan $80, AVAX waa mid ka mid ah qadaadiicda ugu wanaagsan ee halkaas ka jirta. Waa maxay Avalanche ka maqan tahay dib u soo kabashada muddada-gaaban - AVAX si xun ayaa hoos ugu dhacday intii lagu jiray hoos u dhacii suuqii dhawaa - waxay ka dhigaysaa caannimada sii kordheysa.
Si sii kordheysa ula jaan qaada mashaariicda kale ee caanka ah ee Ethereum sida SushiSwap, Avalanche ayaa sidoo kale heleysa ku habboonaanta "buundooyinka," taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay u guuraan cryptocurrencies hal blockchain oo kale.
Taageerayaasha lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida bitcoin waxay u arkaan hab ay uga gudbaan habka bangiyada dhexe u maamulaan sahayda lacagta, taas oo u janjeerta inay hoos u dhigto lacagta waqti ka dib.
Waxay sidoo kale jecel yihiin in tignoolajiyada blockchain ay tahay mid baahsan oo waxay noqon kartaa mid ka ammaan badan hababka lacag-bixinta ee dhaqameed. Waxayna u arkaan qiimaha lacagaha oo kor u kacaya muddada gaaban.
Akhri: Sida Bitcoin loogu gato Kaarka Debit ama Kaarka Debit
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' sida bitcoin looma arko maalgashadayaal badan sida maalgashi dhab ah, inkastoo ay awood u leeyihiin inay yihiin gaadiid mala-awaal ah.
Sababta ayaa ah in faa'iidada cryptocurrency la xaqiijin karo oo keliya haddii qof kale uu ku bixin doono qiimo ka sarreeya lacagahan dhijitaalka ah ee aad samaysay. Taas waxaa loo yaqaan aragtida nacasnimada weyn ee maalgashiga.
Xaalad aad u wanaagsan ayaa ah in la maalgeliyo ganacsiyada kor u kaca qiimaha wakhti ka dib iyada oo la kordhinayo faa'iidada iyo socodka lacagta hawlgalka - hab uu Warren Buffett kula taliyay maalgashadayaasha inay raacaan.
Haddii lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ay u noqon doonaan kuwo wax ku ool ah ganacsiga, waa inay lahaadaan qiyam xasilloon, u oggolaanaya ganacsatada iyo macaamiisha inay go'aamiyaan waxa qiimaha caddaaladda ah ee alaabta.
Bitcoin iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' waxay ahaayeen wax xasilloon ilaa inta badan taariikhdooda - taas oo abuurta jahwareer. Haddii bitcoins ay u qalmi karaan wax badan mustaqbalka, dadku uma badna inay kharash gareeyaan oo ay wareegaan maanta, taasoo ka dhigaysa inay yareeyaan lacag ahaan.
Waa maxay sababta ay u kharash gareeyaan bitcoin marka ay u qalmi karto saddex laab qiimaha sanadka soo socda?
Cryptocurrency waa meel lacagta la dhigto. Looma tixgelin karo maalgashi sababtoo ah ma abuurto lacag caddaan ah, kamana beddeli karto qiimaheeda.
Markaad iibsato dahab ama lacag fiat ah isla sabab la mid ah, qiimahooda isbedbedelka ah ayaa kaliya bixiya dhalanteedka ah inay yihiin maalgashi wanaagsan ama xun. Iyaga laftoodu waxba ma soo saaraan.
Inkasta oo dad badani ay aaminsan yihiin in lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida bitcoin ay noqon doonaan kuwo xasilloon oo laga yaabo inay yeeshaan sifooyinka lacag wanaagsan, waxa la iska indho-tiray ayaa ah in bangiyada dhexe aysan awoodi doonin inay xakameeyaan sahayda lacagahan ee suuqa.
Maaddaama bangiyada dhexe aysan awoodi doonin inay xakameeyaan sicir-bararka iyo sicir-bararka lacag kasta oo kale oo aan sahaydoodu hoos imanayn, waxay u badan tahay inay mamnuucaan cryptocurrencies mustaqbalka.
Akhri: Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsasho Iyo Iibinta Cryptocurrency Sanadka 2022 | Tilmaan Buuxo
Qaar ka mid ah lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ayaa si toos ah loogu iibsan karaa doolarka Maraykanka, laakiin kuwa kale waxa lagu iibsan karaa oo keliya in la iibsado Bitcoin ama cryptocurrency kale ka dibna ka beddelo kuwa aad rabto.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' waa sharci gudaha Mareykanka, inkastoo Shiinuhu asal ahaan mamnuucay isticmaalkooda. Ugu dambeyntii, in kastoo, sharcinimadooda ay ku xiran tahay waddan kasta.
Sidoo kale, hubi inaad tixgeliso sida aad naftaada uga ilaalin lahayd khayaanada kuwaas oo u arka cryptocurrencies fursad ay ku maal-gashadaan biilka. Sida had iyo jeer, iibsadaha iska ilaali.
Haddii aad raadinayso inaad ku iibsato cryptocurrency ICO (bixinta qadaadiicda bilowga ah), akhri
daabacaadda ganaaxa ee rajada shirkadu u leedahay macluumaadkan. Haddii aad raadinayso inaad maalgeliso cryptocurrency, raadi shirkado leh macluumaad laga heli karo ganacsigooda iyo aasaasayaasha.
Sidoo kale, haddii shirkad ay leedahay rajooyinkeeda la heli karo, taasi waa xitaa ka sii fiican - shirkad kastaa waxay yeelan doontaa macluumaad kala duwan, laakiin qadar kasta ayaa ka badan eber.
Ka dib markii aad baarto oo aad kobciso dareenka warshadaha cryptocurrency, waxaa laga yaabaa inaad go'aamisay hal ama dhowr mashruuc oo aad ku maalgashan karto.
Waxay u badan tahay inaad aragto soo-celin weyn haddii aad maalgashato ka dib markaad si fiican u fahamto warshadaha, halkii aad isla markiiba ku boodi lahayd marka lacag cusubi kululaato.
Meesha cryptocurrency waxay raacdaa isbeddello gaar ah (tusaale ahaan, Bitcoin ayaa inta badan horseedda jidka) markaa waa muhiim in la ilaaliyo waxa ka socda warshadaha.
Markaad maalgelinayso lacagaha dhijitaalka ah, xasuusnoow inaad halis gasho. Maalgashadayaal badan ayaa lacag galiyay adduunka lacagta casriga ah kaliya si ay u daawadaan way baaba'aysaa. Markaad sameyso shaqada-guri ka hor intaadan maalgelin, waxaad kordhinaysaa suurtogalnimada in lacagtaada si fiican loo isticmaalo.
Suuqa cryptocurrency waa mid aad u mala awaal ah, maqaalkana ma aha talo uu qoraagu u soo jeediyay in uu maalgeliyo cryptocurrencies ama qadaadiicda bilowga ah.
Mar haddii qof kasta xaaladdiisu ay gaar tahay, waa in had iyo jeer lala tashado xirfadle aqoon leh ka hor inta aan la samayn wax go'aanno dhaqaale ah.
Akhri: 21 Cryptocurrency ugu Xasilloon Sanadkan
cryptocurrency ma ku siinayaa lacag dhab ah?
Cryptocurrencies ayaa laga yaabaa inay kor u kacdo qiimaha, laakiin maalgashadayaasha badan ayaa u arka inay yihiin mala-awaal kaliya, maaha maalgashi dhab ah. Sababta? Sida lacagaha dhabta ah, lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ma keenaan lacag caddaan ah, si aad u faa'iido, qof waa inuu bixiyaa lacag ka badan intii aad bixisay.
Miyay ka wanaagsan tahay in la maalgeliyo saamiyada ama crypto?
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waxay u badan tahay inay tahay hantida keli ah ee ugu kacsan ee aad maalgashan karto. Haddii aad rabto hanti deggan, sanduuqa tusmada S&P 500 inta badan waa khamaar badbaado leh. Haddii aad rabto hanti mala-awaal ah, kaydka shakhsi ahaaneed waa doorasho wanaagsan. Sidoo kale, haddii aad rabto hanti aad u kacsan, crypto si fiican ayey ugu adeegi kartaa doorkaas.
Xaggee lacagtaadu aadaa marka aad iibsato Cryptocurrency?
Haddii aad ka iibsato Bitcoins sarrifka sida Binance ama kuwa kale, lacagtaadu waxay ku socotaa sarrifka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ka soo iibsatid qof haysta bitcoin adigoo ka soo wareejinaya bitcoinkiisa boorsada boorsadaada, lacagtaada waxay ku socotaa isaga sida ay labadiinuba go'aansadeen.
Ma ka heli kartaa nolol ka baxsan cryptocurrency?
Haa, waxaad lacag ku samayn kartaa cryptocurrency. ... In kasta oo celceliska maalinlaha ah ee ganacsiga cryptocurrency uu yahay 1% kaliya ee suuqa sarrifka lacagaha qalaad, waxaa jira isbeddel badan oo suuqa crypto ah. Markaa waxa jirta awood lagu samayn karo ganacsiyo wakhti gaaban ah.
Dawladdu ma xakamaynaysa cryptocurrency?
Nuxur ahaan, sahayda calaamadaha cryptocurrency maaha mid ay dejisay hay'ad dhexe ama dawlad. … Farqiga ugu weyn ee lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ayaa ah in wax kala beddelashada lagu sameyn karo wax kala beddelasho ama wax kala beddelasho toos ah iyadoo la isticmaalayo boorsada cryptocurrency-kaaga.
Lacag ma ku waayi kartaa cryptocurrency?
Cryptocurrencies waxay caan ku yihiin inay noqdaan kuwo aan degganayn. Iyo meesha ay ka jirto isbedbedelka waxaa jira fursad weyn oo lagu sameeyo oo lagu lumiyo lacag. Haddii aad maalgelinayso iyada oo ku saleysan waxa qofka caanka ah uu tweeting ama waxa khabiir iskiis u sheegay inuu kuu sheego inaad sameyso, markaa waxaa jirta fursad wanaagsan oo ay kugu kici doonto.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waa nooc ka mid ah lacagta dhijitaalka ah oo guud ahaan u jirta si elektaroonig ah. Ma jiro qadaadiic jireed ama biil ilaa aad isticmaasho adeeg kuu ogolaanaya inaad lacagta cryptocurrency ku qaadato calaamad jireed.
Wax kasta oo la tixgeliyo, waa inaad haysatid macluumaad kugu filan ka hor intaadan maalgelin crypto.
Crypto waxay xoraysay dadka iyo sidoo kale dadka kacday; farqiga u dhexeeya labadaas nooc ee bini'aadamku waa xogta ay hayaan iyo waxa ay ku sameeyaan macluumaadka.
Waxaan rajeyneynaa inaad heshay jawaabta su'aashan, Maalgelinta cryptocurrency ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee lacagtaada 2022?
Nerdwallet - cryptocurrency-7-waxyaabo-lagu-yaqaano
Warbixin maaliyadeed - waa-waa caqli-si-maal-gelin-in-cryptocurrency-hadda-hadda
Investopedia - waxa- ay tahay inaad ogaato-maal-gelinta-crypto
Fool.com – cryptocurrency fiican
Money.usnews - waa maxay-ugu-ugu wanaagsan-cryptocurrency-in la iibsado
Dib -u -eegista App HITBTC 2022: Ma sharci baa mise waa khiyaano kale oo Cryptocurrency ah?
21 Cryptocurrency ugu Xasilloon Sanadkan
41 Xigasho Awood Leh oo Ku Saabsan Wajihi Cabsidayada 2022
Dadku waxay qabaan cabsi kala duwan oo curyaamisa awoodda ay u leeyihiin inay la kulmaan caqabado gaar ah noloshooda. Markaad ka gudubto…
Haddii aad ka mid tahay macaamiisha xirmooyinka caymiska nolosha, waxaa muhiim ah inaad ogtahay waxa ku jira…
Waxaan hadda ku noolnahay adduun khibrad looga baahan yahay wax kasta oo aad qabato. Waxaad u baahan tahay…